မိမိcareerကို တိုးတက်အောင် ဘယ်လိုပြုလုပ်ကြမလဲ? | Mycanvas
မိမိcareerကို တိုးတက်အောင် ဘယ်လိုပြုလုပ်ကြမလဲ?
အခုလို အလုပ်တွေတစ်ခုပြီး တစ်ခုပြောင်းကြတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းဆီမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ တွန့်ဆုတ်လာကြပါတယ်။ သင်တန်းအသစ်များ ပို့ချထားတဲ့ဝန်ထမ်းများဟာ အလုပ်မှာကြာရှည်မနေသောအခါ အလုပ်ရှင်တို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အချိန်များသာ ကုန်ဆုံးလာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် (self-career development) မိမိဘာသာ လေ့လာသင်ယူမှုတွေဟာ အရေးပါလာပါတယ်။
ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသော ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အတွက် (self-development) ဟာ မိမိ၏ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိမည့် လှေကားများဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ (self-development)ကို အထောက်အကူပြုမည့် နည်းလမ်း (၃)သွယ်ကို အဓိကထားပြောဆိုသွားပါမယ်။
၁။ ရှေ့ရေးကို အစီအစဉ်တကျ ရေးဆွဲပါ။
တချို့သော လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့ မိမိဝန်ထမ်း တိုးတက်မှုသင်တန်းများ အားနည်းနေမှုများလဲ ရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့် မိမိအနေနဲ့ ကြာရှည်သော ပံ့ပိုးမှုများကိုမျှော်လင့်ခြင်းထက် မိမိဘာသာ တိုးတက်မည့်လမ်းများကို လျှောက်လှမ်းလိုက်ပါ။
မိမိလျှောက်လှမ်းရမဲ့ လမ်းများကို ညွှန်ပြပေးမဲ့လူရှိခြင်းဟာ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အတွက်ကောင်းသော အခွင့်အရေးတခုပါ။ ထို့ကြောင့် တချို့သောဝန်ထမ်းများဟာ ခေါင်းဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့ အလုပ်ရှင် ၊ အောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီများကို ရှာဖွေကြပါတယ်။
၂။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း နှင့်အတူလေ့လာသင်ယူပါ။
ဒီနေ့ခေတ် ပြိုင်ဆိုင်လာတဲ့ အလုပ်ဈေးကွက်မှာ မိမိဟာ သူများထက်သာလွန်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ Education အားသာခြင်းဟာ ကောင်းသောအချက် ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကျောင်းမှ ပေးပို့သော အချိန်ပိုင်းသင်တန်းများ၊ online မှပေးပို့သော သင်တန်းများ၊ ပိတ်ရက်တွင်ဖွင့်လှစ်သော workshop များမှ လေ့လာသင်ယူခြင်းဖြင့် မိမိ၏ Education ကိုတိုးတက်အောင် ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။
၃။ မိမိ၏ အားနည်းချက်များကို သိမြင်ပါစေ။
လူတိုင်းဟာ မိမိကိုယ်ကို ပြည့်စုံသော ရှုထောင့်များမှ ကြည့်ရှုလေ့ရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့် မိမိ၏အားနည်းချက်ကို သိမြင်ဖို့ရာ မိမိယုံကြည်ရသော လူများကိုမေးမြန်းပါ။ မိမိလေးစားရသော ပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ အကြံဉာဏ်တောင်းယူပါ။ အားနည်းချက်များကို သိမြင်ခြင်းဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းရဲ့ ခြေလှမ်းအစပျိုးမှုပင် ဖြစ်ပါတယ်။